"Uummanni ofiin of eeguunsaa nageenya buuse" Poolisii Oromiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Irreechi mormiin cimaan kan irratti dhagaahame ta'us, nagaan xumurame
Ayyaanni Irreechaa rakkoo nageenyaas ta'e balaa tiraafikaa tokko malee nagadhaan xumuramu komishiniin poolisii Oromiyaa ibse.
"Haala kenniinsa tajaajilaa poolisummaa irratti hanqinoota duraan qabnu hubannee qophaa'uun keenya, miseensootni keenya tasgabbiin uummata akka tajaajilan taasiseera," jedhan bakka bu'aan abbaa adeemsaa dhimmoota komunikeeshinii komishinichaa, komaandara itti aanaa Guddisaa Guutamaa.
"Obsaan ol'aantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechuun keenyas yeroo kamiyyuu caalaa ayyaanichi nagaan akka xumuramu taasiseera" jechuun komaandara itti aanaa Guddisaan BBC'tti himaniiru.
Nageenyi poolisii qofaan kan mirkanaa'u miti kan jedhan komaandarichi "ayyaana kana irratti uummatni abbaa nageenyaa ture, kanaafis nagaan xumurame," jedhaniiru.
"Sirni fi seerri gadaa kabajamuun isaa wanti bara darbe uummame bara kana akka hin uummamne taasiseera" kan jedhan immoo abbaa gadaa Tuulamaa fi walitti qabaa gumii tokkummaa Abbootti Gadaa Oromiyaa Bayyanaa Sambatuuti.
Irreechi rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame
Ayyaanichi bifa ho'aa ta'een akka kabajamu dhaabbileen dhuunfaa magaalaa Bishooftuu kan akka hoteelaa fi kanneen biroo, sirboota aadaa fi ayyaana irreechaa faarsan dhageessisuu fi tajaajila si'ata kennuun hirmaattota ayyaanichaa keessummeessaa akka turan, kantiibaa itti aanaan bulchiinsa Magaala Bishooftuu Dooktar Alamuu Gonfaa himaniiru.
Ayyaana kana abbumaadhaan gaggeesanii xumuruu isaanitiin abbootti gadaa godinaalee irraa dhufan ni galateeffanna jedhan Dooktar Alamuun.
Akkasumas, haala abbootii gadaatiin murtaa'een nageenya magaalattii si'oominaan eegaa kan ture poolisii Oromiyaafis Bulchiinsi magaala Bishooftuu galata guddaa qaba jedhaniiru.
Kuusaa Fakkii Ayyaanni Irreechaa bara 2017 suuraan yoo ibsamu